Talooyin ku socda Soomaalida ku Shiraysa Garowe - SomalilandPost
Home Maqaallo Talooyin ku socda Soomaalida ku Shiraysa Garowe
Soomaalidu waxay dhibaato iyo dawlad la’aan ku jirtay soddon kii sano ee ugu danbeeyay. Waxay la kulmeen dhibaato kasta oo bini’aadan ku dhici karta oo ay k amid yihiin qax, gaajo, macluul, dagaal, qaxoonti, harraad, xanuun iwm. Waxaa intaas u dheer in uu isbaddalay qiyamkii, mabaadiidii iyo halbeegyadii bulshada soomaaliyeed taas oo ay keenayso xaaladahaas kala duwani. Sannadihii ugu danbeeyay waxaa muuqanaysay inay ka soo kabanayaan qaybo ka mid ah nidaamkii dawladeed ee burburku ku yimi dibna ay usoo noqonayso xasilloonidii iyo kala danbayntii meelo ka mid ah dhulka soomaaliyeed.
WAARI-MAYSIDE WAR HAKAA HADHO.